Saaxiibbada been abuurka ah, ma taqaanniin sida loogu indha indheeyo iyaga oo isha ku qaawan? | Ragga Stylish
Saaxiibada beenta ah
Cimrigeena oo dhan waxaan la kulmi doonnaa dad badan oo laga yaabo inay saaxiibo noqdaan ama ka yar yihiin iyadoo kuxiran duruufaha jira. Waxaa jira dad qiime badan leh oo ay tahay inay noloshaada ku sii jiraan adiga iyo ladnaantaada iyo sidoo kale tooda. Dhinaca kale, way badan yihiin saaxiibo been ah inay iyagu kula joogi doonaan uun wanaagooda ama sahlaanshahooda. Asxaabtaan been abuurka ah mararka qaar way adagtahay in la ogaado madaama ay badanaa heystaan ​​hab ay kugu kalifaan inaad aragto inay wanaag kuu sameynayaan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa cidda ay yihiin asxaabta beenta ah iyo sida aad ugu aqoonsan karto isha qaawan.
1 Maxay yihiin saaxiibo been abuur ah
2 Talooyin lagu garto asxaabta beenta ah
2.1 Waxay kuu noqotaa saaxiibkaa kuugu dhow waqti aan badnayn
2.2 Waxay ku jirtaa waqtiyadii wanaagsanaa laakiin maahan kuwa xun
2.3 Waxay jeceshahay inay ku dhaleecayso ama dadka kale dhaleecayso
2.4 Dhabarkaaga gadaashiisa xumaan kaagala hadal
2.5 Saaxiib rajo xumo badan
3 Saaxiibbo been ah iyo dareen
Maxay yihiin saaxiibo been abuur ah
Saaxiibada beenta ahi waa kuwa ku garab taagan oo kaliya dantooda. Caadi ahaan waxaad haysataa wax aad u fidiso, ha ahaato saaxiibtinimo, waqti, alaab maado ama wax uu u arko inay muhiim u yihiin faa iidadiisa. Dadkani inta badan waxay ka been sheegaan sida wanaagsan ee ay kuu jecel yihiin, sida ay kuu jecel yihiin, ama ay u qiimeeyaan. Si kastaba ha noqotee, marka riixitaanku yimaado shoogaanta, waa kuwa aan kaa xigin markaad u baahan tahay.
Dadkani wax lug ah kuma leh noloshaada markay socotaanba. Badanaa waxay dhahaan weedho dhiirigalin ah laakiin faaruq ah dareen. Waa kuwaa kuwa joojiya la joogidaada, ku ogeysii inaad sameysato qorshooyin markay wax kaaga baahdaan. Ilaa iyo inta aad wax u hayso qofkaas ayaa daneynaya, waxaad ku jirtaa noloshooda waxaadna mudnaan u yeelan doontaa qorshayaashooda oo dhan. Si kastaba ha noqotee, tani way isbedeshaa marka aadan haysan wax aad ku siiso isaga oo isaga xiiseynaya. Taasi waa marka ay kaa fogaadaan ama ka fogaadaan isaga.
Mararka qaarkood cilaaqaadka kale ee asxaabta ku dhow dhow saaxiibkaa ayaa sidoo kale saameyn kara. Si kale haddii loo dhigo, koox ka mid ah asxaabta ayaa kala bixi kara oo keliya maxaa yeelay midkood, inta badan kuwa ugu saameynta badan, ayaa go'aansada in qofka noocaas ah uusan sii wadi karin inuu la joogo inta kale. Xaqiiqdii waligaa waxaad soo martay isbeddelo xubnaha kooxda asxaabta. Isbeddeladan ku saabsan xubnaha kooxda asxaabta waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay dagaal dhexdooda ah, oo aan dano laga wadaagin, qaar khiyaano ku lug leh ama wax ka xun. Tani waa marka dadku go'aansadaan inay joojiyaan ku darista qofkan kooxda ka tirsan.
Xiriirka ka dhexeeya isbeddelada xubnaha kooxaha asxaabta iyo asxaabta beenta ah ayaa ah in kuwani ay yihiin kuwa dhiirrigeliya soo gelitaanka iyo bixitaanka xubnaha kooxda. Midkoodna maxaa yeelay iyaga dan uguma aha ama wuxuu abuuraa xiisad u dhexeysa dadka kale ee kooxda ka tirsan.
Talooyin lagu garto asxaabta beenta ah
Waxaa jira talo bixinno si loo sameeyo habka aad ku ogaato haddii aad leedahay saaxiibo been abuur ah ama aan loo dulqaadan karin. Kuwani waa kuwa ugu badan ee lagula taliyay.
Waxay kuu noqotaa saaxiibkaa kuugu dhow waqti aan badnayn
Waxaa macquul ah inaad saaxiibtinimo kusoo dhex martay noloshaada oo dhan oo isu bedeshay wax ku dhow maalmo yar gudahood. Waa inaad ogaataa in saaxiibtinimada dhabta ahi ay tahay mid been abuur ah oo ku dhisan waqti iyo adkeysi. Saaxiibo fiican sidoo kale waxay leeyihiin dagaallo iyo is afgaranwaayo ku dhammaaday waqtiyo xun qaarkood. Si kastaba ha noqotee, dagaal kasta ama iska hor imaad kasta, saaxiibtinimo sii kordheysa ayaa sii socota.
Waxaa jira waqtiyo marka qof iska dhigo inuu bilaabo saaxiibtinnimo habeennimo adiga. Qofkani wuxuu u dhaqmaa sida saaxiib dhow oo wuxuu kaa doonayaa inaad u sheegto sirahaaga ugu qotada dheer ama ka agdhow. Haddii aad la kulanto dadka nuucaan ah, waa inaad feejignaataa oo aad u dhaqaaqdid caqli. Aaminaada iyo isku xirnaanta saaxiibtinimada ayaa si tartiib tartiib ah u soo ifbaxaya mana fududa in wax la iska bixiyo. Waa la ogyahay in aaminaadu qaadato waqti dheer si loo kasbado laakiin si fudud lagu lumin karo.
Waxay ku jirtaa waqtiyadii wanaagsanaa laakiin maahan kuwa xun
Qofka kula jooga markay noloshaadu fiicantahay laakiin dib uga noqda markaad u baahato. Waxaanan ognahay in dhammaanteen aan had iyo jeer lahayn wakhtiyo wanaagsan, laakiin waxaan soo marnay waqtiyo xun. Mararkaas waxaan u baahanahay dad kale oo naga caawiya sidii aan si fiican ula qabsan lahayn dhibaatada. Haddii saaxiibkaa uusan ku xigin marka aad u baahatid, waa sababta oo ah waa saaxiib been ah. Qofkani ma xiiseeyo marka aad xun tahay, laakiin wuxuu kaliya xiiseeyaa markay wax hagaagaan. Tan waxaa sidoo kale lagu daray in, Xaqiiqdii ma lihid wax aad bixiso.
Waxay jeceshahay inay ku dhaleecayso ama dadka kale dhaleecayso
Waxaa jira dad dhaliili kara wax aad u sameyso wanaag naftaada. Dadkani waa in la qiimeeyaa maadaama ay awood u leeyihiin dhowaan waxa aad khaldan tahay. Si kastaba ha noqotee, Waxaa jira dad kale oo kugu dhaleeceeya adiga oo had iyo jeer wax dhaliila. Sidoo kale, waxaa si fudud loo arki karaa inay imaanayaan iyagoo saacado iyo saacado qaata dhaleeceynta dadka kale. Ayaa halkan kuugu sheegayo hadaad dadka kale dhaleecayso inayan ku cambaareyn doonin?
Asxaabtaan waxaa loo yaqaanaa vampires shucuur leh. Iyagu waa dadkaas xada ladnaantaada shucuureed.
Dhabarkaaga gadaashiisa xumaan kaagala hadal
Tani durba waa dhererka dadka beenta ah. Xaqiiqdii waligeed ma jirto qolo saddexaad oo aad ogaatay inay si xun kaaga hadleen. Waa dad gadaal kaa dhaliila laakiin aan lahayn geesinimo ay kuugu sheegaan waxa ay adiga sida toos ah kaaga qabaan. Dadkan waxaa loo arkaa saaxiibo been abuur ah. Haddii aad wax khaldan samaynayso ama ay khalad u arkaan, waa inay kuu sheegaan wejigaaga. Waxa kale oo aad aqoonsan kartaa haddii qofku had iyo jeer ku dhaleeceeyo oo ku yareeyo adiga oo aan ixtiraamayn ra'yigaaga.
Saaxiib rajo xumo badan
Haddii ay jiraan dad aad u taban oo had iyo jeer arka in waxa aad sameyneyso aysan fiicneyn, Waxay noqon kartaa inay kaa hinaaseen ama ay ku farxaan guulahaaga. Waxa kale oo jira saaxiibo iyagu waxyaalahaaga soo gala iyagoo aan isku dayin inay ku caawiyaan. Kaliya waxay dhiibtaan ra'yigooda iyaga oo aan ku caawin.
Saaxiibbo been ah iyo dareen
Ugu dambeyntiina, mararka qaarkood waa inaad ku hagtaa caqligaaga. Haddii aad ka shakisan tahay inaad leedahay saaxiibo been ah, waqtiga ayaa kuu xaqiijin doona in caqligaagu sax ahaa ama uusan ahayn.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto saaxiibada beenta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Saaxiibada beenta ah
Jose Raul dijo
Waxay u egtahay maqaal wanaagsan aniga. Fudud laakiin wax ku ool ah nuxurka.
Jawaab José Raúl
Cashada culeyska miisaanka
Talooyin ku saabsan sida loo iloobo qofkii aad ka soo tagtay